Nantsi Yonke into malunga nokuThenga iiMeyile ezingafunekiyo | XperimentalHamid
Nantsi Yonke into malunga nokuThenga iMeyile engafunekiyo
Aprili 8, 2021 by USasha Gohar
Wakha wazibuza ukuba kwenzeka ntoni ngeposi kunye neephakeji ezivela ezivenkileni ezingahanjiswanga. Ukuba umthengi akabangi okanye ngenxa yaso nasiphi na esinye isizathu bashiywe bengenabango lokuba bayaphi.
Uya kumangaliswa kukwazi ukuba kukho ifandesi ekhethekileyo apho kuthengiswa khona ezi phakheji. Kukho iinkampani ezininzi ezithenga ezi phakheji emva koko, ziphinde zizithengise. Ezi nkampani zithengisa ezi phakheji njengeebhokisi eziyimfihlakalo.
Zithini iiMeyile ezingafunwanga?
Ukuyithenga phi i-imeyile engafunwanga?
Ungayithenga iMeyile engafuniswanga Ukusuka Apha
Kutshanje intombazana yaseTikTok egama linguStephanie ifike kumthengisi owayethengisa ezi bhokisi. Wayebathengisa ngezinga le-1 kwibhokisi nganye. UStephanie uthenge i-100 yezi bhokisi kwaye ngoku uyazivula kwiakhawunti yakhe yeTikTok kwaye iividiyo zakhe zibanjiwe.
Ufumene amakhadi ezipho kwiivenkile ezinkulu ezinjengeWalmart, Ithagethi kunye njl.
Ixesha elifutshane nelifutshane kukuba isigqibo sakhe sokuthenga ezi bhokisi sasifanelekile. Njengokuba ebuya ngaphezulu kakhulu kunoko ebeqala ukutyala imali. Ukwanenani elikhulu leembono ezivela kwiividiyo azenzileyo zokuvula ezi bhokisi zemfihlakalo.
Inkonzo yeposi yaseMelika (USPS)
Le yi-govt. Isebe nazo zonke iipakeji zexabiso kunye neposi ezishiyekileyo zingafakwanga kwifandesi kwiqonga leeGovdeals. Bahlala benezinto ezinomdla kakhulu ezithengiswayo ngokunjalo kwaye amaxesha amaninzi ayisiyonto imfihlakalo njengoko babhengeza izinto ezithengiswayo kwaye ezo zibandakanya iinqwelo zegalufa, imihlaba yomhlaba njalo njalo. ezi zinto zimangalisayo.
Olunye ukhetho olunomdla kakhulu. Kukho indawo yokugcina efumanekayo ukuze irente kwaye abantu abaninzi banazo ezi zibonelelo. Abantu baqesha ezi ndawo zokugcina kwaye bagcina iimpahla zabo apho. Ukuba abakwazi ukuhlawula irente inkampani ithatha iimpahla ezigcinwe kwiziko njengezibambiso.
Ezo mpahla ke ziyathengiswa kamva okanye zithengiswe. Kuyimfihlakalo epheleleyo ukuba uya kufumana ntoni na kula maziko. Ngamanye amaxesha abantu baba nethamsanqa kwaye bafumane iimoto zemidlalo kunye nezinye izinto zexabiso kwaye ngamanye amaxesha abafumani nto kwaye baphulukane notyalo-mali lwabo.
I-WiBargain liqonga elikwi-intanethi elithengisa iibhokisi eziyimfihlakalo eziqukethe izinto ezingafunekiyo. Ezi bhokisi zezinye iivenkile ezinkulu ezifana neWalmart, iThagethi, iAmazon kunye nokunye banencwadana.
Ababhalisi bafumana ipesenti ye-10 kuzo zonke izinto abazithengayo. Abantu bahlala befumana iimpahla ezinkulu kwezi bhokisi ukusuka kwiibhokisi x ukuya kwizixhobo zegadi, ifenitshala njl.
Apha ungafunda Fumana iidilesi ze-imeyile ezingasebenziyo usebenzisa i-SQL script
Liquidation.com kunye noTywala ngqo
Ezi ziindawo ezimbini zeemarike ezinkulu apho ungathenga khona iimpahla zokucoca. Aba babini badume kakhulu eMntla Merika. Kula maqonga mabini, ufikelela kwimveliso eseleyo okanye engaphezulu kwezinye iivenkile ezinkulu ezinje ngeThagethi kunye neWalmart. Kuhlala kukho itoni yezinto ezikhoyo ezithengiswayo kwaye ungathenga ngobuninzi kula maqonga.
Ngamafutshane, le yintsimi entsha ngokupheleleyo kwaye abaninzi abazi. Abantu abaninzi baye bakwazi ukubetha kakhulu ngenxa yezi mveliso. Kuya kufuneka uzame ithamsanqa lakho. Ngubani owaziyo ukuba ungomnye wababethi abakhulu?
iindidi iindaba, Tech tags Zithini iiMeyile ezingafunekiyo, Ukuyithenga phi i-imeyile engafunwanga? Post yokukhangela
Isahluko se-2962- 2963 seDish esona siNgcono kwiNoveli yeCold
Kodwa xa endithanda TikTok: Intsingiselo entsha yeTikTok